Ferdinand Oo Kula Taliyay Chelsea: "Iska Daaya Lacagta Aad Qasaarineysaan, Lampard Tababare Ka Dhigta, Ha Idiin Noqdo Guardiola-hiina" | Laacib.net
Ferdinand Oo Kula Taliyay Chelsea: “Iska Daaya Lacagta Aad Qasaarineysaan, Lampard Tababare Ka Dhigta, Ha Idiin Noqdo Guardiola-hiina”
June 12, 2019 Balaleti 3
Rio Ferdinand ayaa sheegay in Frank Lampard uu aad ugu haboon yahay shaqada kooxda Chelsea waxaana uu la barbardhigay Pep Guardiola.
Tababaraha haatan ee kooxda Derby County ahna halyeeyga Blues ayaa la hadlay madaxda kooxda kuwaasoo raadinaya bedelka Sarri, wuxuuna xiiseynayaa inuu soo laabto.
Macalinkii hore ee Juventus Max Allegri ayaa isna shaqada u sharaxan kaasoo aad uga khibrad badan Lampard madaama uu qaaday shan horyaal oo isku xigta horyaalka Serie A laakiin Ferdinand ayaa sheegay in saaxiibkiisii hore ee xulka England inuu yahay ninka ugu haboon shaqada Blues.
Sarri ayaa la filayaa in la xaqiijiyo inuu noqonayo tababaraha cusub ee Juventus dhamaadka isbuucaan, laakiin Chelsea ayaa dooneysa inay heysato bedelkiisa ka hor inta uusan bixin.
Lampard ayaa hal xilli ciyaareed tababare ka soo ahaa horyaalka heerka labaad ee Ingariiska, laakiin Ferdinand ayaa yiri: “La yaab ayay igu noqon doontaa haddii ay meel kale wax ka raadiyaan.
“Waxay isku soo dayeen tababarayaal waa weyn. Wax ixtiraamdarro ah uma muujinayo Allegri, waxyaabo aan la rumeysan karin ayuu ka sameeyay Juventus, laakiin Chelsea waxaa soo maray Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Sarri, Jose Mourinhi, dhamaan waa tababarayaal waxyaabo waa weyn soo qaabtay laakiin midkoodna kuma negaanin kooxda.
“Sidaasi darteed ma waxay sii wadayaan inay sidaas sameeyaan oo ay lacag badan ku qasaariyaan tababarayaashaan mise waxay keenayaan qof ay taageerayaasha jeclaan lahaayeen inuu soo laabto?”
Dad ayaa shaki gelinaya awooda Lampard laakiin Ferdinand ayaa ku sooday in Pep Gaurdiola uusan khibrad laheyn markii uu Frank Rijkard ka bedelayay shaqada Barcelona.
Ferdinand ayaa hadalkiisa raaciyay: “Dadku waxay ka hadlayaan khibrad iyo waxyaabo la xiriira laakiin muxuu khibrad kahaa Pep Guardiola markii kooxda koowaad ee Barcelona uu qabanayay?Wuxuu tababare u soo ahaa caruurta kooxda.
“Miyuu Lampard cadaadis dareemi doonaa marka ciyaartoyda waa weyn ay si xun u dhaqmaan garoonka tababarka? Uma maleynayo inay taasi dhaceyso. Frank wuu yaqaanaa Chelsea, wuu yaqaanaa ciyaartoyda, ciyaartoyduna waa ay ixtiraami doonaan.”
Dhanka kale Frank Lampard ayaa kulan qado ah shalay waxa uu magaalada London kula yeeshay halyeeyga kale ee Chelsea Didier Drogba, waxaana shaki ku jirin inay ka wada hadleen hamigiisa ah inuu tababare ka noqdi Stamford Bridge.
Yuu Cali says:
Darogba waxaatba mooda
In uu yahy mulkiilaha naadiga
Wayo naadiga aad ayuu uga fikira waxan xasuusana keenis tii eden hazard siduu
Ugu luglaha asiga hadana waxay taagan tahy halyeh lampard
yousuf sulub says:
Chelsea waxba ikamabadalayaa haduu lampad yimaado
laacibnet maxaatihiin kiristaan mise muslin? maxaa keenay inaad injiil soo dhexdhigtaan ciyaaraha aan akhriyayno hadaad kiristaan tihiin noo sheega aan iska dayno wixiinee midakale ninka kiristaan xayaysii ku yidhi ogsoonow inuu ku galiyay wax uu fahansanyahay inay guuldarro ku dhammaanayaan waar isagiisaan injiil u hogaansanayn oo faasiq ah khamriga cabba naagtuu doono la tunta muxamadna beeniyay wallaahi waxaan aaminsanahay in qofkaasi fahansayahay waxa uu wado iyo lug gooyada ku jirta kadibna adiguu kugu fasaadinayaa